Porn wuxuu ku xiran yahay kor u kaca dembiga galmada | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Sharciga Kacsanaanta dembiyada galmada
Heerka dembiga galmada wuxuu ku yaalaa taariikhi sare ee Scotland halkaasoo xeer ilaaliyeyaashu ay ka warbixiyaan dambiyada galmada ee 80% ee kiisaska kufsiga ee Maxkamadda Sare ee Justiceary.
Garsooraha ugu sareeya ee England iyo Wales, Lord Chief Justice, Lord Thomas Cwmgiedd, ayaa sheegay in kiisaska gafafka galmadu ay kor u kacayaan oo aan lagu sharraxi karin kaliya kiisaska taariikhiga ah ee soo ifbaxaya. "Qaar ka mid ah sawirada filimada sawir-qaadku waxay ka baqayaan waxa ay muujinayaan iyo shaki la'aan waxay saameyn ku leeyihiin dadka." Inkasta oo uu ku tilmaamey saameynta xun ee arimahan oo kale garsoorayaasha, haddana si siman ayay u khuseeyaan dadweynaha guud ahaan fiidiyowga ayaa muujinaya sawirro badan.
Fiidiyowgaan wuxuu muujinayaa Dave Thompson, Taliyaha Sare ee Booliska West Midlands, oo ka soo hormuuqanaya Guddiga Arrimaha Gudaha ee Baarlamaanka 25 Oktoobar 2017. Wuxuu ka hadlayaa sida uu uga naxay waxyaabaha galmada ee saraakiishiisu ay ka helayaan ragga ka socda Boqortooyada Ingiriiska. webka mugdiga ah. (Independent, 28 ilbiriqsi)
Luuqada sharciga ah waa ganacsi weyn oo weyn. Helitaanka diyaarka ah ee helitaanka qaawan ee fudud ee lebbiska internetka oo ay weheliso qaraabo aan la garanayn ayaa ka dhigtay taleefannada casriga ah 'waa inay leeyihiin' badeecad iyo dhexdhexaad madadaalo fudud.
Dhibaatooyin badan ayaa ku fiirinaya xayawaankooda telefoonnada gacanta marka loo eego kombuyuutarada. 62% carruurta da'doodu tahay 12-15 waxay leeyihiin telefoonno casri ah sida ku xusan warbixinta 2013 Ofcom.
Maskaxda maskaxda ayaa saameyn ku yeelan karta xad-gudubka internetka, gaar ahaan maskaxda aan qaangaarka ahayn ee dhalinyarta, waxay keeni kartaa dabeecad adag iyo dabeecad aan fiicnayn oo u horseedi karta dembi galmo.
Xitaa haddii maqnaanshaha faraxumeynta, qof ayaa lagu xukumi karaa dambi culus. Tusaale ahaan, mid ka mid ah dhalinyarada da'da yar, waxaan ugu yeeri doonaa Bob, waxaa lagu xukumay haysashada filimada carruurtiisa, sababtoo ah tirada sawirrada naas-nuujinta ah ee uu ku lahaa telefoonkiisa casriga ah. Kuwani waxay ahaayeen sawirro isaga u soo diray Facebook iyo warbaahinta kale ee bulshada oo ay carruurtu muujinayaan da'yartii hore. Inkastoo uusan la kulmin gabdhahaan, keligii lahaanshaha ayaa ku filnaa isaga oo maxkamad la saarayo.
Cawaaqibka ciqaabta dembiga galmoodka ah sida haysashada filimada carruurta ayaa dhab ahaantii ogaysiin doonta Diiwaanka Dembi-Galmeedka Dumarka. Maxay tani macnaheedu u tahay ficilka qof sida Bob?
Waxaa loola jeedaa inuu lumin doono xirfadiisa sare, xirfad faa'iido leh. Ma awoodi doono inuu helo fiiso si uu saaxiibkiisa ugu kaxeeyo Disneyland ee Maraykanka ama meel kale oo dibadda ah. Haddii ay mar dambe leeyihiin carruurtooda, waxa uu noqon doonaa kormeer joogto ah oo ay sameeyaan shaqaale bulsho xitaa kadib markii magaciisu ka yimaado Diiwaanka Dembiilayaasha Galmada. Dhammaan arrimahan oo dhan waxay u dhaceen sababtoo ah jaahilnimadiisa ku saabsan sharciga iyo suurtogalnimada in qaar ka mida dhallinyarada aan waxba galabsan ee xiisaha badan ee soo jiidashada leh, WAGs-da dhallinyarada ah ayaa go'aansaday in ay haystaan ​​qayb ka mid ah qaab nololeedka caanka ah.
Ka dhigista dhalinyarada ay ka warqabaan halistaas maanta waa muhiim. Ma aha oo kaliya 'khatarta khatarta ah' iyo ka baqashada shabakadda internetka ee ay daryeelayaashu u baahan yihiin inay noqdaan feejignaan, laakiin dhibaatada carruurtoodu waxay keenayaan iyaga oo aan ogeyn oo kaliya iyagoo ceyrsanaya casriga casriga ah, iyo inay sameeyaan waxa 'qof kasta oo kale' u muuqda inuu qabanayo . Muuqaalka sawir-qaadashada internetku wuxuu maskaxda ka saari karaa si ka duwan TV-yada ama joornaalada jilicsan iyo DVD-yada.
Haysashada ama qaybinta sawirrada galmada ee carruurta waa sharci darro. Haddii aad aragto adigoo daawanaya kuwan oo aad ka walwalsan tahay, la xiriir sadaqada Jooji Hada! Khadadka ama Lucy Faithfull Foundation. Xitaa haddii aadan u jeedin inaad la kulanto cunug ujeeddo xiriir galmo, haysashada sawirro kali waxay u horseedi kartaa booqasho booliis. Sidoo kale la xiriir hay'adahaas samafalka ah haddii booliska mar horeba ay ku soo gaareen.
<< Ka aarso Porn Warshadaha Porno >>